Ny taonan-tserasera dia na aiza na aiza, mihamitombo izany, ary manova izay mety ho an'ny mpikaroka.
Ny laharam-pahamehan'ity boky ity dia ny fahatsaran'ny taona nomerika vaovao ho an'ny fikarohana ara-tsosialy. Ireo mpikaroka dia afaka mahita ny fitondrantena, mametraka fanontaniana, manandrama manandrama ary miara-miasa amin'ny fomba izay tsy azo tanterahina amin'ny lasa. Miaraka amin'ireo tombontsoa vaovao ireo dia mety hitranga vaovao: Ny mpikaroka dia afaka manisy ratsy ny olona amin'ny fomba tsy azo tanterahina amin'izao fotoana izao. Ny loharanon'izany fahafaha-manao sy loza izany dia ny fifindrana avy amin'ny vanim-potoanan'ny taona ho an'ny taona dizitaly. Tsy niova tanteraka io fiovan'ny toetr'andro io-toy ny fiovaovan'ny hazavana - ary raha ny marina, mbola tsy feno izany. Na izany aza, efa nahita zavatra ampy isika amin'izao fotoana izao mba hahafantarana fa misy zavatra goavana mitranga.
Ny fomba iray hahatsikaritra ity fifindrana ity dia ny hitady fiovana eo amin'ny fiainanao andavanandro. Maro ny zavatra eo amin'ny fiainanao izay efa lasa analônôzôra ankehitriny. Angamba efa nampiasa fakantsary tamin'ny sarimihetsika ianao, fa amin'izao fotoana izao dia mampiasa fakantsary nomerika ianao (izay mety ampahany amin'ny findainao). Angamba efa namaky gazety ara-batana ianao, fa ankehitriny dia mamaky gazety an-tserasera ianao. Angamba ianao nandoa vola amin'ny vola, fa ankehitriny dia mandoa vola amin'ny carte de crédit ianao. Amin'ny toe-javatra tsirairay, ny fanovana avy amin'ny analogie nomerika dia midika fa ny fampahalalana bebe kokoa momba anao dia voasambotra ary voatahiry ara-potoana.
Raha ny marina, rehefa nijery ny fitambaran-kery dia mahatalanjona ny vokatry ny tetezamita. Ny habetsaky ny fampahalalana eto amin'izao tontolo izao dia mihamitombo haingana, ary maro amin'ireo fampahalalam-baovao no mitahiry am-pahibemaso, izay manamora ny fanadihadiana, ny fifindrana ary ny fiaraha-mientana (faha-1.1). Ireo fanazavana nomerika ireo dia antsoina hoe "angona goavana". Ankoatra ity fipoahana nomerika nomerika ity, dia misy fitomboana mifanaraka amin'ny fahafahana mampiasa herinaratra (tarehintsoratra 1.1). Ireo fironana ireo-ny fitomboan'ny tahirin-tserasera sy ny fitomboan'ny fahafaha-manatsara ny fizarana-dia mety hitohy amin'ny hoavy mialoha.
Figure 1.1: Mihamitombo ny fahaizan'ny tahirin-tsakafo sy ny angovo azo ampiasaina. Ambonin'izany, ny tahirin-tseraseran'ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana dia saika dizitaly. Ireo fiovana ireo dia manome fahafahana mampiavaka ny mpikaroka ara-tsosialy. Nampifanarahina tamin'ny Hilbert and López (2011) , tarehimarika 2 sy 5.
Ho an'ny tetik'asa fikarohana ara-tsosialy, heveriko fa ny singa lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana nomerika dia ny ordinatera na aiza na aiza . Manomboka amin'ny milina an-jorom-bahiny izay azon'ireo governemanta sy orinasa goavam-be ihany, dia nihena ny habetsaky ny ordinatera ary nitombo ny isam-batan'olona. Isan-folo taona lasa izay dia nahita karazana fanambarana vaovao ny solosaina finday: solosaina finday, solosaina, finday mahazatra, ary ny processeur vao tafiditra ao amin'ny "Internet of Things" (izany hoe, ordinatera ao anaty fitaovana toy ny fiara, famantaranandro ary thermostats) (Waldrop 2016) . Mihabetsaka, tsy vitan'ny hoe manitsy fotsiny ireny ordinatera rehetra ireny; Mahatsiaro, mitahiry ary mampita vaovao koa izy ireo.
Ho an'ny mpikaroka, ny fiantraikan'ny fisian'ny ordinatera na aiza na aiza dia mora hita amin'ny Internet, tontolo iainana izay voafaritra tsara sy azo ampiharina amin'ny fanandramana. Ohatra, ny fivarotana an-tserasera iray dia afaka manangona angon-drakitra tena marina momba ny fivarotana lamandy mpanjifa an-tapitrisany. Ankoatr'izany dia afaka manala vondron'olona mpanjifa mahafa-po azy ireo hahazoana traikefa isan-karazany. Ity fahafaha-manao tsikombakomba amin'ny fanaraha-maso ity dia midika fa ny fivarotam-piaramanidina an-tserasera dia afaka mandamina tsy tapaka ny fanandramana mifehy. Raha ny marina, raha efa nividy zavatra avy amin'ny magazay an-tserasera ianao, ny fitondran-tena narahanao dia azo antoka fa mpandray anjara tamin'ny fanandramana, na fantatrao izany na tsia.
Io izao tontolo izao feno tanteraka, tsy misy azo ekena velively dia tsy mandeha amin'ny aterineto fotsiny; Mihamitombo hatrany izany rehetra izany. Ny magazay ara-batana dia efa manangona angon-drakitra be dia be amin'ny antsipirihany, ary manatsara ny fotodrafitrasa izy ireo mba hanaraha-maso ny fivarotana akanjon'ny mpanjifa ary handanjana fanandramana amin'ny fampiharana ara-barotra. Ny "Internet of Things" dia midika fa ny fitondran-tena eo amin'ny tontolon'ny zavaboahary dia hikorontana amin'ny alàlan'ny sehatra nomerika. Amin'ny teny hafa, rehefa mieritreritra ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika ianao dia tsy tokony hieritreritra afa-tsy amin'ny aterineto , tokony hieritreritra na aiza na aiza .
Ankoatra ny fanamafisana ny fitondran-tena sy ny fitsaboana ny fitsaboana, dia namorona fomba vaovao ho an'ny olona koa ny vanim-potoana nomerika. Ireo karazana fifandraisana vaovao ireo dia ahafahan'ny mpikaroka mitarika fanadihadiana vaovao ary mamorona fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa aminy sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny.
Ny fisalasalana dia mety manondro fa tsy misy na dia iray amin'ireo fahafaha-manao ireo aza dia tena vaovao. Izany, taloha, dia nisy ny fandrosoana hafa amin'ny fahafaha-mifandray amin'ny olona (ohatra ny telegraph (Gleick 2011) ), ary ny (Gleick 2011) dia lasa haingana kokoa amin'ny taham-pifanarahana mitovy amin'ny taona 1960 (Waldrop 2016) . Saingy ny tsy fisian'ny fisalasalana io dia ny hoe amin'ny lafiny iray, ny iray hafa dia lasa zavatra hafa. Ity no fampiharana tiako (Halevy, Norvig, and Pereira 2009; Mayer-Schönberger and Cukier 2013) . Raha azonao sary an-tsaina ny soavaly iray, dia manana sary ianao. Ary, raha azonao atao ny misambotra sary 24 avy amin'ny soavaly iray isan-tsegondra, dia manana sarimihetsika ianao. Mazava ho azy, sarimihetsika fotsiny ny sarimihetsika iray, nefa ny fisalasalana mahery vaika dia mitaky fa ny sary sy ny sarimihetsika dia mitovy.
Ny mpikaroka dia eo am-pandinihana ny fanovàna amin'ny fivoaran'ny sary sy ny sary. Izany fiovana izany anefa dia tsy midika fa ny zavatra rehetra nianarantsika taloha dia tokony tsy hiraharaha. Tahaka ny foto-kevitry ny sary manazava ny momba ny sinema, ny fitsipika momba ny fikarohana ara-tsosialy izay novolavolaina nandritra ny 100 taona dia hampahafantatra ny fikarohana ara-tsosialy izay hatao ao anatin'ny 100 taona manaraka. Saingy, ny fiovana koa dia midika fa tsy tokony hanao zavatra mitovy foana isika. Tokony hanambatra ny fomba fiasa taloha isika miaraka amin'ny fahaiza-manaon'ity ankehitriny sy ho avy ity. Ohatra, ny fikarohana an'i Joshua Blumenstock sy ny mpiara-miasa dia fiaraha-miasan'ny fanadihadiana nentim-paharazana izay mety hiantsoan'ny sasany ny siansa. Samy ilaina avokoa ireo fitaovana roa ireo: na ny valin'ny fanadihadiana na ny antso an-tariby dia tsy ampy hahazoana vokatra avo lenta amin'ny fahantrana. Amin'ny ankapobeny, ireo mpikaroka ara-tsosialy dia mila mampiaraka hevitra avy amin'ny siansa sosialy sy ny siansa momba ny siansa mba hanararaotra ireo fahafaha-maivana amin'ny taona dizitaly; Tsy ampy ny manatona irery.